Huawei G730 မှာ မြန်မာလို မမြင်ရတဲ့ မြန်မာ apk တွေကို ပြုပြင်နည်း ~ mgkhainghtoo
22:17 မောင်ခိုင်ထူး No comments
***ပထမဆုံး သက်ဆိုင်ရာ developer တွေအားလုံးကို ဒီနေရာကနေ credits ပေးပါတယ်။***
Huawei G730 မှာ မြန်မာဖောင့်က တော်တော်ကို ဒုက္ခပေးပါတယ်။ Font Changer တော်တော်များများနဲ့လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ Huawei G730 MMFont ဆိုတဲ့ font changer တစ်ခုတည်းနဲ့သာ အဆင်ပြေပါတယ်။ (မရှိသေးရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။) ဒါတောင် ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်သေးပါဘူး။ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကို ရောက်လာတာပါ။ အပေါ်က font changer ကိုသုံးပြီးတာတောင် တစ်ချို့ မြန်မာ apk တွေမှာ မြန်မာလို မပေါ်သေးပါဘူး။ အခုပြောမယ့် နည်းလမ်းလေးကတော့ မြန်မာလိုမပေါ်တဲ့ apk တွေကို ပေါ်အောင် ပြုပြင်တဲ့နည်းလေးပါ။
Step 1. winrar မရှိသေးတဲ့လူတွေအတွက် winrar ကို အရင်ဆုံး install လုပ်ပါ။ ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့်ကို ကျော်လိုက်ပါ။
Step 2. မြန်မာလိုမပေါ်တဲ့ apk ကို Right click >>> Open with >>> WinRar Archiver နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ။ (ကျွန်တော်က Shwebook dictionary နဲ့ ဥပမာလုပ်ပြထားပါတယ်။ )
double click နဲ့ ဝင်လိုက်ပါ။ fonts ဆိုတာ ထပ်တွေ့ပါမယ်။ ထပ်ဝင်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ zawgyi.ttf , zg1.ttf ကဲ့သို့သော ဖောင့်တစ်ခုခု တွေ့ပါမယ်။
သူရေးထားတဲ့ နာမည်ကို သေချာမှတ်ပါ။ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ဖောင့်ကို အထဲမှာ ပါတဲ့ဖောင့်နာမည်နဲ့တူအောင် rename လုပ်ပါ။
rename လုပ်ပြီးသားဖောင့်ကို winrar ထဲကို drag ဆွဲထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ winrar ကို ပိတ်လို့ရပါပြီ။
Step 3. ဒီအဆင့်မှာတော့ ပြင်ပြီးသား apk ကို sign ပြန်လုပ်ရမှာပါ။ APK Multi-tool ကို zip ဖြည်ပါ။
setup.bat ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
3 ကို ရိုက်ထည့်ပြီး enter တစ်ချက်ခေါက်ပါ။
Step 4. place-apk-here-for-signing ဆိုတဲ့ folder ထဲကို ခုနက ပြုပြင်ပြီးသား apk ကို ကော်ပီကူးထည့်ပါ။
Step 5. script.bat ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ ကြိုက်ရာ key တစ်ခုခုနှိပ်ပါ။
18 လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ Signing .... ဆိုပြီး sign လုပ်ပြီးတာနဲ့ သူ့အလိုလိုပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ place-apk-here-for-signing ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ sign လုပ်ပြီးသား မြန်မာလိုပေါ်မယ့် apk လေး ရပါပြီ။
Shwebook dictionary for G730
NWCalendar for G730